Global Voices teny Malagasy » Oganda: Fikorontanana tamin’ny oram-pifaliana (Happy Hour), sy resaka hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jolay 2018 20:19 GMT 1	 · Mpanoratra Rebekah Heacock Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Teknolojia, Zavakanto & Kolontsaina
Niteraka adihevitra tamin'ity herinandro ity ilay Ogandey bilaogera sady mpanakanto hip-hop Saving a Generation Endangered  (S.A.G.E.) raha namelively izy tao amin'ny fanatrehana ny Bloggers Happy Hour  (BHH) ao Ogandà nandritra ny antsafa Blogging a Blogger  notarihan'ny Country Boyi :
Haingana avy hatrany ireo bilaogera namaly, na tamin'ny fanehoan-kevitra na tamin'ny bilaoginy ihany. Avy amin'i Dennis Matanda :
Somary nalemy fanahy tamin'ny fihetsiny i Magoola , izay naka endrika taratasy tao amin'ny S.A.G.E.:
Niaro  an'i BHH i Cheri:
Tsy resahana intsony ny korontana amin'ny bilaogera, mitondra an'i S.A.G.E. sy ny BHH i Ivan no sady mibilaogy mivantana ny Ugandan Blogumentary , sarimihetsika fohy novokarin'ny mpianatra Danoà efatra tonga teto Ogandà tamin'ny volana Aprily:
Jereo Sage , sy Dee … ary Rev  mamerina ny Nokia izany… ary diso fijery amin'ireo mpihazona labozia. Naman-dratsy, RATSY !!
Bilaogera mpila ravinahitra Kelly  manintona ny saina momba ny lahatsary fanadihadiana iray hafa navoaka vao haingana:
Nanao fampisehoana antsoina hoe “Miverina any Oganda” izy ireo omaly. Nanasongadina tanora mpanao gazety Kanadianina / Indiana (tsara tarehy mahagaga) izany izay noroahan'i Adi Amin hiala tao Oganda ny ray aman-dreniny fony izy mbola zaza niverina tany amin'ny tranom-pianakaviana ary nijery ny fifandraisana ara-poko sy ara-politika teo amin'ireo Ogandey Aziatika sy ny Ogandey Mainty. Raha liana momba an'i Oganda ianao dia tsy dia misy dikany manokana izany. Tezitra mafy i Paul nahita izany, indrindra rehefa nohadihadiana ny zanaka lahin'i Idan Amin, Taban Amin. Nampirotsaka ny ranomasoko izany mba hahita ireo fikomiana mahery vaika vao haingana tamin'ny fahitalavitra. Nalaina taorian'ny korontana Mabira Forest  tao Kampala, sambany aho no nahita horonantsary ahitana mpanao fihetsiketsehana anti-Aziatika tamin'ny fihetsiketsehana, nandoro fiara ary nidaroka Indiana. Lasa adala mieritreritra fa i Kampala keliko izany. Azonao atao ny mijery ny fandaharana manokana ao amin'ny Youtube .
Ary i Iwaya no nanakatona ny herinandro tamin'ny fanomezam-boninahitra  an'i Sam Cooke :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/16/122719/
 naneho hevitra : http://buttercookie.wordpress.com/2007/08/08/when-doves-cry/#comment-1969
 mibilaogy mivantana : http://nadayada.wordpress.com/2007/08/06/the-ugandan-blogumentary-a-review/